ईश्वर पोखरेलका छोरालाई रामधुलाई ! - Sidha News
ईश्वर पोखरेलका छोरालाई रामधुलाई !
काठमाडौैं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा पि टिएका छन् । दरवार्गमार्ग स्थित एक डान्स क्लवमा उनी पि टिएका हुन् ।
नि र्घात पिटिएका पोखरेलका कान्छा छोरा स्वरुप पोखरेलको चार दिन ग्यान्डी अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । घटना भने केही समय अगाडी दशैका बेलाको हो ।
‘दु ब्र्यसनी’मा रहेका पोखरेलका कान्छा छोरालाई क्लवमा राती एक समुहले कुट पिट गरेको पोखरेलकै पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । आफु उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको छोरा भएको र आफुलाई कोही कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै अराजक शैलीमा उफ्रिन थालेपछि क्लवमै आएका अर्काे एक समुहले उनीमाथी कुट पिट गरेको हो ।
कुट पिट पछि स्वरुप बेहोस भएका थिए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि ग्यान्डी अस्पताल पु¥याईएको स्रोतले बतायो। कुटपिटपछि बेहोस बेनेको र अस्पताल ल्याईएको खबर सुनेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले बेलुकी नै छोरालाई भेटन ग्यान्डी पुगेका थिए ।
भिआईपी छोरा कुटिएको खबरले तरंग जान सक्ने भन्दै घटनालाई पोखरेलकै आग्रहमा अति गोप्य राखिएको थियो । जसकाकारण घटना अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन।
कुट पिटवाट बेहोस स्वरुपको चार दिन पछि मात्र होस खुलेको थियो । पोखरेलका दुई छोरा छन् । कान्छा छोरा स्वरुप मादक पदार्थमा झुम्न रमाउने गर्छन् । त्यही कारण पनि उनी बेला– बेला डान्सवार जाने गरेका थिए ।
त्यसोत पोखरेलका कान्छा छोरा बेला बेला विवादित बन्दै आईरहेका छन् । उनी वाउको शक्तिको आडमा उठौती धन्दामा पनि लाग्दै आईरहेका छन् । आफनो वावु रक्षा मन्त्री भएको कारण पनि उनले सेनाभित्र कतिपय अवस्थामा वार्गेनिङ धन्दा समेत चलाउदै आएको सेनाकै कतिपय अधिकृतहरु बताउँछन्।
अमेरिकामा अन्तराष्टिय सम्वन्ध पढेर फर्केका थिए , स्वराज । पोखरेलका जेठा छोरा सिजन भने कृर्षि अध्ययन केन्द्र नार्कका वैज्ञानिक छन् । (हाम्रोसवालबाट)